Sefafi : “tsy rototra amin’ny fanisam-bahoaka ny olona” | NewsMada
Sefafi : “tsy rototra amin’ny fanisam-bahoaka ny olona”
“Tsy mitovy lenta ny vaovao azon’ny mponina manerana ny Nosy. Ny korontana avy amin’ny zava-misy ara-politika koa etsy andaniny, hany ka tsy rototra velively amin’ny fanisam-bahoaka ny olona. Voalaza aza fa nisy tena nanda noho ny tsy fandriampahalemana, ary ahina ho lasa herisetra aza ireny fandavana ireny.”
Fanambaran’ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi): “Ny fanambin’ny fanisam-bahoaka” nampitainy, omaly, io. Tena faran’izay mavesa-danja ho an’ny fitantanana sy ny politikam-panjakana ny Fanisana manontolo ny mponina sy ny fonenana (RGPH). Saingy nomena ny lanjany sahaza azy ve izany?
Misy fepetra takina hahombiazana
Tokony ho tsara sy mirindra ny fampitam-baovao amin’ny hetsika andraisan’ny mponina anjara toy izao. Izay no ahombiazana ka tokony ho nohatsaraina. Saingy nanaraka ny sivana sy ny fitsipika mifandrindra amin’izany ve ny nifantenana ny birao mpampita vaovao?
Ahombiazana koa ny manambatra ny fahaizana amin’ny herin’ny finiavan’ny olona manao ny fanisana sy ny manodidina azy.
Araka ny notakin’ny asa ve no nifantenana izay hanao izany? Hahombiazany ve ny fanofanana nomena azy? Nahoana no tratra aoriana ny fandoavana ny tambin-karamany? Nahoana no ilaozan’ny toetrandro ny fitaovana nomena hiasany? Hahombiazana nefa tsy nasiana vidiny ny fandrafetana tetika maty paika sy tokana, amin’ny fanangonana sy ny fampitana ny vaovao azo.
Ny mampiahiahy farany, ny momba ny manampahefana any an-toerana tsy rototra firy: ny any amin’ny kaominina, indrindra ny any amin’ny fokontany. Inona ny tetika sy fomba nampiasaina hampiraika ny mpiandraikitra azy ireny?
Mila dinihina ireo olana
Mba hahatonga ireny zava-bita ireny ho metimety kokoa ka hifanaraka amin’ny fenitra iraisam-pirenena, tokony ho nahazoana nanamafy ny maha asam-panjakana sy asa teknikan’ny Instat ny fanisam-bahoaka. Saingy nety ve ny fizahana natao, ary fomba fiasa tsara ve no nampiharina, rehefa nanitatra ilay andrimpanjakana sy nanamafy ny fandrindrana ny fitaovana ho an’ny antontanisa?
Tsara raha averina dinihina indray ireny olana ireny. Raha tsy izany, tsy maintsy irariana mafy mba ho azo antoka sy ho azo trandrahina ny vokatry ny fanisam-bahoaka, ka hifarimbona amin’ny fanatsarana ny fitantanana sy ny politikam-panjakana.